Ukuthengwa kwamanzi kuyadingeka ukuze kwandiswe induduzo yokusebenzisa amanzi. Uma wenza i-wiring nge-pipe eyodwa, uma uvula izigubhu eziningana, ikhanda lingase likhululeke. Ngenxa yalokho, umuntu ogeza ishaywa uma umuntu ephenduka amanzi ekhishini. Sula le nkinga ngokusebenzisa ukusabalalisa okuningi, kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi ungayikhetha kanjani.
Umqoqo wamanzi uyisisetshenziswa esihlukanisa amanzi emifuleni eminingi ngesikhathi esisodwa. Isimiso sokusebenza sihlala silingana nalokho okwejwayelekile. Umsakazo owodwa ungena epayipi, futhi ezimbili ziphuma kuwo ngokushesha. Ububanzi besilwane kufanele bube mkhulu kunomkhawulo wesilinganiso esivela ku-20-40%. Ngakho-ke, uma ama-valve amaningana evuliwe ngesikhathi esisodwa, akukho ukwehla kokugeleza nokucindezela kwamanzi.
Amanzi amaningi angakwazi ukuhlukanisa umfudlana owodwa zibe ezincane ezincane, kanti ukucindezela nokusetshenziswa okukhulayo kuzohlala kuzinzile, ukwehlukana kokugeleza kwenziwa ngepayipi lobukhulu obukhulu uma kuqhathaniswa nesikimu sendabuko. Okumangalisa kakhulu ububanzi bombhobho, amanzi amaningi azodlula kuwo isikhathi esithile.
Kungani ukhetha ikhefu
Njengomkhuba wokubonisa, isifundazwe sokuqoqa uhlelo lwamanzi lukhululekile kakhulu ukusebenza, uma kuqhathaniswa nesiko lendabuko, elinama tees namajoyini. Noma kunjalo, izindleko zezinto zokwenza ngcono zidlula le parameter ngezikhathi ezingu-8-10. Yingakho lesi sikimu singasebenzi uma isabelomali sokubeka uhlelo lwamanzi selinganiselwe .
Izinhlobo Eziyinhloko Zabaqoqi Bokusabalalisa
Ukuthengwa kwamanzi kungenziwa ngezigaba ngokwezinto ezisekelwe phansi. Inqubo yokukhiqiza ingasetshenziswa:
Izinhlobo zobuchwepheshe bokufaka
Ungaphinde uhlukanise abaqoqi ngendlela yokulungisa amapayipi. Uma intambo ingaphakathi noma yangaphandle, ukunyuka kufakwe. Ukulungiswa kungenziwa ngosizo lwe-Eurocone noma ngokusebenzisa ukufakwa kokucindezelwa kwamapayipi epulasitiki namaplastiki. Amapayipula epulasitiki, ukufakwa kwezingubo zokugcoba nakho kusetshenziselwa, phakathi kwezinye izinto, ukuhlanganiswa kungahlanganiswa. Esikhathini esilandelayo, emigodini yomklamo ohlaba umxhwele kakhulu umcibisholo, kuyilapho ububanzi obuncane buhambisana nokucindezela, ngezinye izikhathi kufakwe indawo ye-eurocone.
Izinhlobo zamagumbi ngamanani amathinta
Umqoqi wamanzi abandayo, kanye namanzi ashisayo, angahlukaniswa ngokusho kwenani lezinsimbi. Inani labo lingalingana nomkhawulo kusuka ku-2 kuya ku-6. Imikhiqizo inezinsimbi ezimbili, ezihambisana nobubanzi bombhobho wokuhlinzeka futhi zenzelwe ukufaka. Ngosizo lwabo, amabhlokhi amaningana axhunyiwe kunye eyodwa ngaphandle kokusebenzisa amakheli e-adapter engeziwe.
Kwesinye isikhathi futhi kwenzeka ukuthi ibhulokhi elilodwa liwanele, kepha njengesinye isixazululo, amaphugi akhethekile wepulagi asetshenzisiwe. Abaqoqi bangasetshenziswa ukunqamula abanye abathengi, kuyilapho abanye bengathinteki. Lokhu kuyasiza ezimweni lapho kudingeka khona ukulungisa noma ukubuyisela amapayipi, ukulungisa indawo eyonakalisiwe noma ukuhlanza uhlelo lokuthuthwa kwamanzi, kanye nendawo ethile yepayipi.
Izinhlobo zabaqoqi ngabakhiqizi
Uma sicabanga ngezinhlobo zama-combs, umthengi ngezinye izikhathi uyakunakekela umqoqi kude, ongathengwa ngezindleko kusuka ku-1000 kuya kuma-ruble angu-2400. Esimweni sokuqala sikhuluma ngezinto eziningi ezilawulwa ngamagatsha amabili. Ibanga lokushisa lokusebenza lingashintsha kusuka ku- +5 kuya ku- +100 ° C. Ingcindezi yokusebenza ibha 10, ibanga eliphakathi kwamacompu lilingana no-45 mm.
Uma udinga umqoqi onamagatsha amathathu, ungakhetha indlela, kuzodingeka ukhokhele ama-ruble angu-1500. Uhla lokushisa lokusebenza nokucindezela okusebenzayo kuyaqhubeka kufana nebanga phakathi kwamacompu. Umqoqo omkhulu angaba namagatsha amane, kuyilapho kudingekile ukuthi ukhokhele ama-ruble angu-2050. Izici ezisele zihlala zifanayo. Imodeli eqoqa kakhulu kunazo zonke ezivela kulo mkhiqizi - (BP-HP) 1 "-1/2" inezinhlamvu ezingu-4 nezindleko ezingu-2309 ruble.
Uma uthengiswa, ungathola futhi abathelisi Rehau. Ziyingozi kakhulu. Isibonelo, imodeli enezimboni ezimbili zokushisa ama-radiator zibiza ama-ruble angu-5500. Uma ukugoba kuyizintathu, imodeli izobiza okungabizi kancane. Izindleko kulokhu ziyi-ruble 5300. Idivaysi iqukethe amapayipi wokusabalalisa, ububanzi bawo buyi-intshi eyodwa. Uphawu olusetshenzisiwe luyisicaba, futhi ukuxhumeka kungenzeka kunhlangothi zombili. Amabakaki aqondile anezakhiwo ezingenakuphilisa futhi zenziwe ngensimbi enamathelisiwe. Abathelisi "Rehau" ngokuhlinzeka ngamanzi kuthatha ukutholakala kwezinsipho zokuxhuma zokuxhuma. Ukwakhiwa konke kwenziwe ngethusi.
Ukufakwa koqoqo lwamanzi kwenziwa endaweni ethile, okuzoxhomeka ngenhloso yedivayisi. Ngokuvamile lokhu kulesi sigaba kuhloswe ngenhlangano yokunikezwa kokushisa okuhlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ikhefu lingase libe yinto ephoqelekile yamanzi afudumele. Ngaphambi kokuba uqale ukufakwa kuyadingeka ukwenza ukubalwa kwekhasi, umsebenzi oyinhloko lapha ukusabalalisa okufanako kwengcindezi eceleni komjikelezo.
Uma uhlelo lunehlelo oluyinkimbinkimbi yemigwaqo emikhulu, ukubalwa kufanele kwenziwe ngosizo lwezinhlelo ezikhethekile. Ukuhlomisa uhlelo ngenombolo yezifunda ezinhlanu, umuntu angasebenzisa isimiso sezingxenye ezilinganayo: N0 = N1 + N2 + N3 + N4. Kule fomula, i-N0 ichaza ububanzi bendawo, kanti zonke ezinye izindinganiso ziyizingxenye eziphambene zamapayipi ayo egatsha. Lolu hlelo lokubala lusetshenziswa ekwakhiweni kwenqwaba ngesandla. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi ubukhulu bomkhiqizo wokukhipha nokufaka okuningi. Ilungiselelo leqoqo elijwayelekile alikho izidingo zefomu. Ingaba nesigaba sokwahlukanisa noma isikwele.
Isimiso esiyinhloko sokufaka kanje: ukuze kuthuthukiswe ukusakazwa, kubalulekile ukufaka amaphampu wesifunda ngasinye, ikhefu lokuhambisa akufanele linikeze ukuvumelanisa kwamapompo. Ukusabalalisa okuningi ukuhlinzekwa kwamanzi kungaba yingxenye yesistimu, ehlinzekela ukuba khona kwendlu ye-boiler. Uma le node ikhona kuyo, ukusetshenziswa kwebhokisi lokuzivikela kuyinqaba. Ngokungafani, ukufakwa kwekhefu ukushisa kuhlelo lokufudumala, izakhi zalo ezenziwe nge-polypropylene. Ukuze ulawule umthamo womthwali wokushisa, kuyadingeka ukufaka ama-valve wokulawula ekuphumeni nasekuxhumaneni kwe-inlet, lokhu kungaba yi-flowmeter yokulinganisa kanye nezivalo ze-inlet.
Abaqoqi bemishini yokuhambisa amanzi kufanele bafakwe ngemuva kokuhlela ukufakwa, futhi inkosi kufanele ihlinzekele ukuba khona kweqembu lokuphepha esikhungweni sokusabalalisa. Kuye ngemingcele ethile yesistimu yokushisa, izincomo jikelele zingafakwa futhi zishintshwe. Ngaphandle kwale mithetho, ochwepheshe bayelulekwa ukuba bacabangele umehluko ebude bemikhakha lapho bebala umqoqo wokushisa. Kubalulekile ukuklama isifunda ngendlela yokuthi ububanzi bezintambo zilingana. Ukuze unciphise ukusetshenziswa kwamandla, kungenzeka ukufaka i- unit mixing ye -unit unit, ezokwenza ukunciphisa izindleko zokushisa.
Indlela yokukhetha umqoqi ofanelekile
Ngaphambi kokuthola umqoqi, kuyadingeka ukunquma ukuthi inani labathengi bamanzi ashisayo nabandayo liyoba yini. Lezi zihlanganisa izitsha zangasese zangasese, izibhebhe, ama-daishishers, imishini yokuwasha namanye amadivayisi. Inkosi kufanele inqume uhlobo lwamapayipi wamanzi, okuzokwenza ukuthi kunqunywe ukukhethwa kwedivayisi nokufakwa okwengeziwe. Uma uthenga inqwaba enezivali ezifakiwe, kuzoba kuhle kakhulu ekufakweni, ngoba i-valve ngayinye ngeke kudingeke ibekwe eceleni.
Uma inani labathengi lingavumelani nenani lokugoba, khona-ke ama-combs amaningana angathengwa, okwenza wonke umuntu. Ukuze uxhumane nephayiphi yokuhlinzeka eyenziwe nge-polyethylene ehlanganisiwe noma i-polypropylene, kufanele uthenge umqoqi kusuka kulezi zinsimbi. Zishibhile kunensimbi, kulula ukufaka futhi hhayi ezansi ngaphansi kokuthembeka. Inhlanganisela ye-polypropylene kufanele ixhunywe nge-soldering, kuyilapho i-polyethylene - isebenzisa ukufakwa kwe-compression.
Basal cell carcinoma kwesikhumba